Mmekorita aka megide Crime Crime OPEN INVITE - Element Society
Akwụkwọ ozi na-emeghe ndị ndú obodo, ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ndị ọrụ ntorobịa, ndị ọkachamara, mahadum, ọrụ ọha na eze, ndị na-eto eto, ọha na eze na onye ọ bụla chọrọ ịkwụsị mpụ ọjọọ na n'okporo ámá anyị.
Onye ọ bụla maara na mpụ aka ọjọọ bụ nnukwu nsogbu mba na mpaghara, karịsịa emetụta ndị na-eto eto.
Anyị nile ga-agbakọta aka na mgbaru ọsọ nke iwepụ mpụ ọjọọ na obodo anyị. Ọ dị mkpa na anyị niile jikọtara, na-adị n'otu, na ozi kwekọrịtara na mmekọ ọnụ.
Ndị otu anyị na Element nọ na-arụ ọrụ na ndị mmekọ tinyere ndị uweojii South Yorkshire na Sheffield University nke Hallam ka ha mee nchọpụta mbụ banyere echiche nke ndị na-eto eto banyere njide na mpụ mma.
Usoro mbu nke data na stats dị njikere ma tinyekwara m na njedebe nke blog a. Ọnụ ọgụgụ nke ndị na-eto eto 132 nke 16-17 nọ na nyochaa. Nnyocha ahụ kpuchiri ebe nile Sheffield. Anyị na-amụba nha nke a karịa ọnwa ole na ole sochirinụ.
E nwere ihe dịka ndị na-eto eto 30 (ndị 16 na 18) bụ ndị chọrọ itinye aka na mgbasa ozi mgbochi ọjọọ. Ndị a na-eto eto na-eduzi ọdịnaya vidiyo ma na-akpọsa echiche. Anyị ga-enwe ụlọ ọrụ mmemme mpụ na-enweghị n'efu maka ụlọ akwụkwọ na ndị nkụzi ndị ọzọ na Sheffield.
Enwere ọtụtụ mkparịta ụka ndị ọzọ banyere mpụ ọjọọ na-eme n'obodo ahụ. Anyị ga-achọ ịme mkparịta ụka ndị a iji mee ihe ọbụla dị irè dị ka o kwere mee na mbenata mmetụta ozugbo nke mpụ ọjọọ na ịtọ ntọala dị mma maka ọdịnihu.
Onye ọrụ ibe m bụ Will Earp (will.e@elementsociety.co.uk / 0114 2999 210) na-aga n'elu mmekọrịta anyị na ndị mmekọ dị ugbu a.
Biko nweta aka ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịme òkè na mkparịta ụka, ma ọ bụ bịa gwa onwe m na Will.
Enwere ike ịkwado blogto a onye ọ bụla ị kwenyere na ya ga-abụ akụkụ nke mkparịta ụka ahụ.
Nchọpụta * Nchọpụta nyocha (n = 132) N'ime ndị na-eto eto a gbara ajụjụ ọnụ:
90% nke ndị na-ebu mma nwere ndị ọgbọ nke na-ebukwa mma
43% nke na-ebu mma na-ebi na S6 ma ọ bụ S7
52% nke na-ebu mma bụ White British
73% kwenyere na ndị mmadụ na-ebu mma maka nchedo, na-eche na echeghị ihe ọ bụla
16% kwenyere na ndị mmadụ na-ebu mma n'ihi ọrụ metụtara ndị òtù
15% kwenyere na ndị mmadụ na-ebu oka maka metụtara aha mmadụ (nke a na-ele dị ka 'jụụ' site n'aka ndị ọgbọ.)
57% nke ndị otu a kwuru na mpụ ọjọọ na-eme n'ihi arụmọrụ metụtara òtù ndị omempụ, ma ọ bụ esemokwu / esemokwu n'etiti otu
67% nke ndị na-akọ na-ebu mma, zara na ndị mmadụ na-ebu mma maka nchekwa, na 63% zara na mpụ ọjọọ na-eme n'ihi òtù ndị metụtara ọrụ
(igosi na ndị ntorobịa chere na ha ga-ebu mma na mpaghara ndị metụtara òtù iji chebe onwe ha)
* Nke a bụ nchọpụta na-aga n'ihu na ọnụ ọgụgụ ndị a sitere na nsonye mbụ nke ndị na-eto eto 132, site n'aka Sheffield, bụ agadi 16-17, nakọtara July na August 2018.